Jereo ny fanangonana Dolce Diva nataon'i Kiko Milano amin'ny fahavaratra | Bezzia
Fanangonana Dolce Diva an'i Kiko Milano amin'ity fahavaratra ity
Susana Garcia | | beauty, Vokatra hatsaran-tarehy
Kiko Milano dia iray amin'ireo orinasa ankafizinay ary asehony antsika foana ireo fanangonana vaovao izay mety tsara hankafizana ny vanim-potoana tsirairay. Amin'ity indray mitoraka ity dia mitondra fanangonana avy amin'ny fahavaratra izy, amin'ny fahavaratra mahafinaritra eo amin'ny morontsirak'i Mediterane antsoina hoe Dolce Diva. Fanamboarana endrika miaraka amin'ny aingam-panahy italiana mety amin'ny teti-bola rehetra mitondra rivotra any amin'ny fahavaratra.
La Ny fanangonana Dolce Diva dia aingam-panahy avy amin'ny fahamendrehana maharitra izay nanaparitaka ny Dolce Vita italiana. Amin'ireto fanangonana ireto dia mahita vokatra tsara, zava-baovao, tononkalo sy firakotra tsara ary kalitao tsara amin'ny vidiny mirary foana izahay, noho izany dia mendrika ny mahita ny zavatra rehetra azonao atolotra anay.
1 Maninona no tianay ny fanangonana Dolce Diva
2 Vokatra tarehy
3 Asongadino ny masonao
4 Vokatra Dolce Diva molotra
5 Fantsika mahafatifaty
Maninona no tianay ny fanangonana Dolce Diva
Ity fanangonana ity dia aingam-panahy avy amin'ny fomba italiana, izany hoe kanto miaraka amina fomba mahazatra sy manaitra amin'ny fotoana iray. Ity famoriam-bola ity dia manana ny kilasika mahafinaritra noforonina indray, hanaovana akanjo amin'ny fahavaratra. Ny kitapo mahafinaritra dia tadiavina isaky ny sombin-javatra, na dia ao anaty fonosiny aza. Ireo formula dia miaro ny masoandro, zavatra tena manandanja amin'ny fahavaratra, rehefa tokony hikarakara ny tenantsika bebe kokoa noho ny hatramin'izay isika. Ho fanampin'izany, maharitra sy mateza izy ireo.
Manomboka amin'ny fombafomba fanomanana ny hoditrao amin'ny Perfecting Face Fluid miaro ny hazavan'ny masoandro miaro ny hoditrao hatramin'ny farany avo indrindra. Izy io dia manome ny hoditra voajanahary sy mamiratra, manomana azy hampihatra ny dingana manaraka. Ny fototra misy tsiranoka miaraka amin'ny singa 50 Fresh Feel Foundation dia manana alokaloka maromaro ary miasa mba hahazoana tonony mitovy amin'ny hoditra. Ilay mpanafina ranoka manalefaka dia mahavita manarona ny tsy fahalavorariana ary miaraka amin'ireo vovoka avo literiterenay hanasongadinana ireo fiasa amin'ny fanazavàna faritra sasany. Ny bronzer namboarina dia mpanao hoditra tsara tarehy vita vita milamina, lavorary amin'ity fahavaratra ity.
Asongadino ny masonao
Ny maso dia iray amin'ireo singa misongadina indrindra rehefa manao makiazy isika. Ny fototry ny maso tsy miandany dia vokatra tonga lafatra hanombohana ny masontsika, hampitambatra ny makiazy. ny palette eyeshadow dia manome alokaloka tsara tarehy ho antsika miaraka amin'ny loko ety an-tany, mavokely klasika ary mamirapiratra kely, mba hanomezany azy ny hakantony. Fenoy ny masom-bolonao ary ny mascara tsy tantera-drano. Satria ampahany manan-danja ihany koa ny volomaso, amin'ity famoriam-bola ity dia manana ny famaritana volomaso isika, mpiorina volomaso misy mpangataka tsotra izay tsy mahazaka rano ihany koa.
Vokatra Dolce Diva molotra
Ao amin'ny vokatra molotra dia hahita kosmetika telo isika hanatanterahana ireo dingana hahatratrarana molotra tonga lafatra. Tokony hampiasa ny fikosohan-molotra, fikosohan-molotra hamela azy ireo ho malefaka. Aorian'izay, ny balsam-molotra miaro dia ampiharina amin'ny sunscreen ho toy ny fotony. Ary farany, tsy maintsy asianay ilay lokomena maharitra hahatratra ny molotra maharitra amin'ny alokaloka manomboka amin'ny mena mahery ka hatramin'ny mavokely. Classics mahafinaritra ahafahanao mamorona ny molotrao amin'ity fahavaratra ity. Ny faran'ny lipstika dia matte, ho an'ny molotra malefaka sy maharitra.
Ireo fanangonana ireo dia tsy afaka mahita antsipirihany sasany hanambatra ny hoho amin'ny makiazy. Amin'ity famoriam-bola ity dia misy alokaloka maro efa tonta hatrizay, manomboka amin'ny raozy tsara tarehy ka hatrany amin'ny mena midorehitra foana fa ny olon-drehetra tia sy izay tsy tokony hisalasalantsika hampiasa vola. Ho dingana voalohany dia tsy maintsy ampiharintsika ny fotony izay miaro ny hoantsika mba tsy ho simba amin'ny fampiasana enina maharitra. Ao amin'ny famoriam-bola dia nieritreritra loko efatra izay mitambatra amin'ny volon'ny masony sy ny molony izy ireo. Haran-dranomasina, mena, volomparasy ary volomparasy iray. Farany manana ny rotsakorana hanamaina haingana ny hoho isika ary hahatonga azy ireo ho lavorary.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Fanangonana Dolce Diva an'i Kiko Milano amin'ity fahavaratra ity
Inona ny diastasis amin'ny kibo
Torohevitra hankafizana ny fialantsasatra amin'ny maha mpivady